Apple patent patani tambo yeApple Tarisa iyo 'inozvigadzirisa' kune iyo ruoko | Ndinobva mac
Apple patents tambo yeApple Watch iyo 'inozvigadzirisa' kune iyo ruoko
Chazvino chishamiso icho Apple chaakatigadzirira chine chekuita neyakanaka wachi yayo. Asi isu hatisi kutaura nezvemabasa matsva, asi chimwe chezvikamu zvacho chingave chakangwara. Ndezve iyo zvigadziriso zvinogadziriswa izvo mushandisi anogona kuchinjanisa parizvino sezvaanoda.
Zvino, muUnited States Patent uye Yekutengeserana Hofisi, Cupertino zano razvino rakawanikwa. Sekuunganidzwa AppleInsider, ndezve tambo yekuzvigadzirisa; ndiko kuti, tambo yaive nechinhu chekugona kuomesa kana kusunungura zvichienderana nehupamhi hwechiuno chimwe nechimwe.
Zvinoenderana nezvinyorwa zvinofambidzana neiyo patent, Apple inotaura kuti nzira dzazvino dzekugadzira tambo hadziite kuti zvive nyore kuti zvinhu izvi zvikwane mushandisi wega wega zvakapihwa huwandu hwakakura hwemadimitha anogona kuve. Saizvozvo, zvinotsanangurwa izvo kukanganisika kwakaipa kweApple Watch kune chiuno kunogona kuguma nekuverenga kwakashata kwema sensors Del kupfeka kubva kuApple. Uye zvakare, izvi zvinogona kuwedzeredzwa kana mushandisi achidzidzira zvemitambo, ziya uye wachi inogona zvishoma nezvishoma kusununguka.
Izvi zvinhu ndizvo zvave zvakatungamira Apple kuisa patent chigadzirwa chakadai cheiyo smart wachi. Nzira dzakasiyana dzakanyorwa mu patent kuti uwane iyi gadziriso kune millimeter.. Pakati pavo mhinduro dzakadai sezvikamu zvinowedzerwa mumabhanhire zvinokurukurwa; sanganisa ndangariro tambo mukati mebhandi. Kana, ita zvikamu zveiyo Apple Watch chassis iyo inowedzera. Nemhinduro yekupedzisira iyi, zvinonzi chikamu cheApple bhokisi chingatenderedza ganda remushandisi uye chinyatsobata.
Saizvozvowo, chinangwa ndechekuti tambo ine ndangariro uye kuzivikanwa kwemushandisi kuburikidza nema biometric sensors inosanganisirwa uye kana iyo Apple Watch yaiswa paganda, inogadzirisa kusvika pakakwirira kuenda kumuridzi wayo. Zvino, usakanganwa kuti Apple inofunga nezvese uye paizove netsika yekugadzirisa nzira kuburikidza nechiratidziro che kupfeka. Kwechinguva, zvese zvinounganidzwa gwaro uye hatizive kana ichizoburitswa munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple patents tambo yeApple Watch iyo 'inozvigadzirisa' kune iyo ruoko
Eddy Cue anoenda kuIndia kunovhura Mac Lab nyowani
Tim Cook: "Nhasi, kudzidza kodhi kwakakosha kupfuura kutaura Chirungu"